María Moliner ma ọ bụ mgbe emepere ọbá akwụkwọ 5.000 na Spain | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
María Moliner ma ọ bụ mgbe emepere ọbá akwụkwọ 5.000 na Spain
Maria Ibanez | | Akwụkwọ
Taa bụ ụbọchị a na-asọpụrụ ndị edemede na nnukwu ọrụ akwụkwọ. Mana, achọrọ m ịkwanyere otu nwanyị na-edeghị akwụkwọ, mana o metụtara ka mmadụ niile nwee ike nwee omenaala na ịgụ akwụkwọ.
Ana m ekwu maka Maria Moliner, onye a chefuru echefu echefu echefu nke Republic ma tinyekwa aka na mmeghe ọba akwụkwọ wee mepụta akwụkwọ ọkọwa okwu ama ama: Akwụkwọ ọkọwa okwu nke María Moliner.
María Moliner (Zaragoza, 1900-Madrid, 1981), bụ onye na-agụ akwụkwọ, onye na-amụ banyere ihe ọmụmụ na ọkà okwu. Ada nke dibia ime obodo, ọ gụsịrị akwụkwọ na History na Mahadum nke Zaragoza na otu afọ ka e mesịrị site na mmegide wee banye na ngalaba nke Archivists, Librarian and Archaeologists.
1 Mkpọsa nke Republic na Ozizi Pedagogical
2 Akwụkwọ ọkọwa okwu nke Spanish nke María Moliner dere
3 María Moliner taa
Mkpọsa nke Republic na Ozizi Pedagogical
María, bụ́ onye lụrụ ụmụ, biri na Valencia mgbe a na-akpọsa Republic na 1931. Otu ọnwa ka e mesịrị, gọọmentị mepụtara Board of Pedagogical Missions, nke María na-etinye aka ma mepụta ndị nnọchi anya Valencian.
Na 1931 amaghị akwụkwọ na Spain karịrị 44 pasent, ebe imirikiti ụmụ nwanyị nọ, na ọ bụ naanị ụzọ isii nke ndị bi na ya nwere akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ Luis Cernuda, Juan Vicens na María Moliner na-ahazi ọrụ Ọbá akwụkwọ ahụ ma nye ya 60 pasent nke mmefu ego nke edlọ Akwụkwọ Pedagogical, nke pụtara na n'agbata 1931 na 1936 5.522 ọba akwụkwọ ọhụrụ.
Na Valencia, María tinyere ike ya nile n'ịgbasawanye ọba akwụkwọ ndị a na-ekesa, bụ́ nke nwere ọtụtụ narị akwụkwọ maka obodo ma ọ bụ obodo nta ọ bụla, ma ụmụaka ma ndị okenye. Gburugburu ọba akwụkwọ, ọ haziri usoro okwu nkuzi, nnọkọ ihe nkiri, nyocha redio na ọba egwu ahọpụtara, ebumnuche bụ isi na atụmatụ mgbanwe ya maka mmuta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Dị ka a ga-atụ anya ya, enweghị ọtụtụ ọbá akwụkwọ na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ọba akwụkwọ, ya mere o kpebiri ịhapụ ha n'aka ndị nkuzi nwoke na nwanyị yana ndị nne nke ezinụlọ, ebe ọ chọpụtara na ha nwere ọtụtụ nchegbu gbasara omenaala karịa mụ nwoke wee hụ ụmụ nwanyị zuru oke.
Dika María Moliner si akowa banyere ọba akwukwo:
Ọ bụ maka ịkpọte na ịkwalite ịhụnanya maka ịgụ akwụkwọ, nke kpatara na n'ọgbe ndị ezigara enwere ọtụtụ akwụkwọ na-atọ ọchị na ọestụ mara mma, yana ndị nwere ozi zuru oke gbasara echiche ndị ahụ, nsogbu ndị ahụ na esemokwu ndị ahụ na-eme ka ụwa maa jijiji iwu nke echiche na ebumnuche niile nke ndụ, ihe mejupụtara ihe mmadụ ahụ nke na-enweghị ike ịbụ onye mba ọzọ nye onye ọ bụla.
El Dictionary nke spanish eji nke María Moliner dere
Echere na otu akwụkwọ ọkọwa okwu kachasị mma na nke Royal Academy (RAE), nke Gredos bipụtara ya na nke mbụ ya na 1966-67 na María Moliner ji ihe karịrị afọ iri na ise mepụta ya.
Akwụkwọ ọkọwa okwu a nke nkọwapụta, otu okwu, okwu na nkebi ahịrịokwu, yana ezinaụlọ okwu, bụkwa ezigbo ọkọwa okwu na nghọta.
María Moliner tụrụ anya na akụkụ ụfọdụ dị ka echichi nke Ll na Lna nke Ch na C (nkatọ na RAE agaghị eso ruo 1994) ma ọ bụ ntinye okwu na-ejikarị eme ihe mana na RAE anabataghị, dịka okwu ahụ cybernetik.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere akwụkwọ ọkọwa okwu a, na Instituto Cervantes webụsaịtị ha nwere ntinye zuru oke na ya.
María Moliner taa
María Moliner bụ ihe atụ nke ikpe na-ezighị ezi n'ebe ụmụ nwanyị nọ na obi ịta mmiri nke nkwenye zuru oke.
Banyere ọba akwụkwọ ya, agha obodo Spanish na ọchịchị aka ike Franco na-esote bibiri nnukwu ọrụ nke ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ nke Ozi Alakụba na mmuta na mmekọrịta nke ọdịbendị. Dị ka Juan Vicens si kwuo na France na 1938 mgbe ọ na-ekwu okwu banyere mkpali a na-enye ịgụ akwụkwọ n'ihu ọha n'oge Republic na Spain:
Akụkọ a dị mfe, dị otu a mgbe ndị mmadụ dabara na ndị iro: a gbagburu onye na-agụ akwụkwọ, gbaa akwụkwọ akwụkwọ, ma gbaa ndị niile sonyere na nzukọ ya egbe ma ọ bụ kpagbuo ha.
N'aka nke ọzọ, María Moliner bụ nwanyị izizi mbụ ga-anọdụ n'oche oche na Royal Academy of the Language, n'agbanyeghị na ọ bụ nwanyị, ma bụrụkwa onye ndị ọkachamara were dị ka onye na-agụ akwụkwọ karịa onye ọkà mmụta sayensị, n'agbanyeghị na ọ kwadobere akwụkwọ ọkọwa okwu dị mkpa, mere ka ọ banye mgbe ọ bụla.
Carmen Conde, onye edemede na nwanyị mbụ kwetara na Academy na 1979, echefughị ​​ịkọ ya n'ụzọ na-enweghị isi na okwu nbata ya:
Mkpebi gị magburu onwe ya na-akwụsị ịkpa ókè na-ezighị ezi na edemede oge ochie.
Isiokwu a na-asọpụrụ nwanyị a nke asụsụ na ọdịbendị nke meere akwụkwọ ahụ nnukwu ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » María Moliner ma ọ bụ mgbe emepere ọbá akwụkwọ 5.000 na Spain
Asunción Huertas Aka ekpe dijo
Ọ dị m mma igosipụta ụdị mmadụ a nke ọdịbendị Spanish, ịkpa ókè nke ugboro abụọ maka ịbụ nwanyị na iji rụọ ọrụ ezi ihe nlereanya ya n'oge Republic. Obi ekele m nwere n’ebe ọ nọ, ebe echiche ya, ọ bụ ezie na ọtụtụ afọ agabigawo, amịpụtala mkpụrụ na ọba akwụkwọ ka na-agbanyeghị nsogbu ahụ, ebe ndị ahụ ezutere na nghọta n’etiti ndị mmadụ.
Zaghachi Asunción Huertas Izquierdo
Don Quixote n’ụwa: ọbịbịa ya nwayọ na China